Amabinzana asuka kwiincwadi nababhali ukoyisa iingxaki | Uncwadi lwangoku
Amabinzana asuka ezincwadini nababhali ukoyisa iingxaki
Ebomini, ngamanye amaxesha sizifumana sikwiimeko ezinzima okanye amaxesha ekunzima ukuwoyisa. Kule mizuzu, kuxhomekeke kubunzulu babo, singaphila kwaye sijongane nabo ngendlela ebhetele okanye embi, kodwa namhlanje kwenzeke ukuba ndifunde ibinzana elindenze ndacinga ngale nto. Kuhambe into enje: «Uyazi ukuba umntu akalunganga xa engafuni nokufunda». Kwaye kuyinyani!
Kwaye ukuba ukufunda incwadi kunzima kuthi xa sibuhlungu, kutheni ungazifundanga amabinzana asuka ezincwadini nababhali ukoyisa iingxaki? Zifutshane, kwaye zithetha kakhulu! Sinethemba lokuba uyabathanda ...
Yiba yindoda okanye ube ngaphezulu kwendoda. Qiniseka ngenjongo yakho kwaye uqine njengelitye » (UFrankestein, uMary Shelley).
"Ilanga libuthathaka xa liphuma kuqala, kwaye lifumana amandla kunye nesibindi njengoko imini iqhubeka" (Ivenkile endala yecurio, uCharles Dickens).
"Kungobusuku bukaDisemba, xa ithemometha ikuziro, xa sicinga ngelanga kakhulu" (Abahluphekileyo, uVictor Hugo).
"Yilwa kude kuphele umphefumlo" (UHenry VI, uWilliam Shakespeare).
"Yeka ukuzikhathaza ngokuguga kwaye cinga ngokukhula" (Isilwanyana esifa, uPhilip Roth).
Ucinga ukuba uyazi onke amathuba akho. Emva koko abanye abantu beza ebomini bakho kwaye ngequbuliso baninzi ngakumbi » (Indawo enokwenzeka, uDavid Levithan).
«Nokuba ungubani na, nantoni na oyenzayo, xa unqwenela into ngokuqinileyo, kungenxa yokuba lo mnqweno wazalelwa emphefumlweni wendalo iphela. Yinjongo yakho emhlabeni » (Ingcali yeAlchemist, uPaul Coelho).
"Ubomi bethu buchazwa ngamathuba, nkqu nalawo siphulukana nawo" (Ityala elinomdla likaBenjamin Button, F. Scott Fitzgerald).
"Xa uzithuthuzele, uya konwaba ukudibana kwam" (INkosana encinci, uAntoine de Saint-Exupèry).
"Kuyakubanzima kakhulu kum ukuziphindezela kubo bonke abo kufuneka beziphindezele, kuba ukuziphindezela kwam kuya kuba yenye nje into yesiko elingenakuxoleleka" (Indlu yeMimoya, Isabel Allende).
«Olona lonwabo lukhulu lolona lusilindeleyo. Namhlanje nangomso khange kuthiwe. Amathuba, utshintsho lolwakho lonke ukuba lwenziwe. Ukubumba kobomi bakhe ezandleni zakhe kukophula » (IHobbit, JRR Tolkien).
«Ngekhe uyazi ukuba leliphi ithamsanqa elikusindisileyo kwithamsanqa elibi» (Akukho lizwe lamadoda amadala, uCormac McCarthy).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Amabinzana asuka ezincwadini nababhali ukoyisa iingxaki
URuth Dutruel sitsho
Yinyani. Ngamanye amaxesha bendidandatheka kakhulu kangangokuba bendimane ndibukela umabonwakude. Bendizicoca ...
Phendula uRuth Dutruel
UStewart kunye noMitchum. Isikhumbuzo seminyaka engama-20 sokubhubha kwaba badlali babini babalaseleyo
Ukuhlalutya ukuqaqanjelwa kwengqondo, ukusuka eNgũgĩ wa Thiong'o